Apple Music iri kuuya kuKeynote munaGunyana? | Ndinobva mac
Will Apple Music ichauya kuna Keynote munaGunyana?
Peter Rhodes | | Apple Music, iTunes
Nyamavhuvhu anotarisirwa kutamiswa uye, zvakare, Keynote yeavo vanobva kuCupertino vari kusimudzira zvakawanda kutarisira. Iyo Keynote uko iPhone nyowani, nyowani Apple Watch, inofanirwa kusvika, iyo AirPower kuchaja base, iyo nyowani AirPods yekuchaja kesi uye ndiani anoziva zvimwewo.
Kana ndiri akatendeseka, handifunge kuti kune zvakawanda zvakawanda maficha izvo zvavanoisa patafura mune imwechete Keynote uye chokwadi ndechekuti mune yekupedzisira, kana isiri yekupedzisira yezvose, yaive yakadzvanywa zvakanyanya.
Kana iwe ukatarisa pazviri, zvese zvandakaburitsa kare zvinongobata chete zvine chekuita ne Hardware kunyangwe isu tichiziva kuti iyo iOS 12 software ichasvika nekukurumidza zvakare. Zvino, zvakadii nezve masevhisi egore? Pachave nenhau dzeICloud?Ko nhau dzichauya mukushanda kweApple Music?
Uyu mubvunzo wekupedzisira unomutsa kuda kuziva uye ndewekuti Spotify iri kuyedza kusasarudzira seApple yekufambisa sevhisi inosanganisira nhau senge dzinogona kubviswa kwehumwe kushambadzira kushambadza pamahara maakaundi.
Dai izvi zvaive zvakadaro, Apple inofanirwa kufambisa tebhu uye ndeyekuti kunyangwe isu tisingazvitende, Apple Music haina kunaka sezvainofanirwa kunge iri. Tine dzimwe nzira dzakawanda patinofunga izvo zvinopihwa neSpotify. Izvo zviri pachena ndezvekuti Apple haidonhe isina tambo uye kana nhau dzakasimba kwazvo dzikasvika mu Hardware, idzi dzinozotsigirwa ne software yekuvandudza zvese imomo uye muICloud gore.
Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira nekuenderera mberi tichirota nekuti munguva pfupi Tim Cook nechikwata chake Ivo vachakwira pachikuva kurova zvakare patafura yehunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iTunes » Will Apple Music ichauya kuna Keynote munaGunyana?
Gadzira nyanzvi dzemapepa dzinoenderana nenharembozha nedesktop zvigadzirwa neMail Designer
Nzvimbo yakatarwa yekuvhura Apple Store muAustralia inoramba ichipa matambudziko